Dhegayso Spotify u iPhone online ama Spotify offline iPhone
Spotify waa ugu fiican music madal ujeeddo ah heesaha la dhageysto labada offline ama online. Iyadoo Spotify ee, users la siiyo fursado aad u weyn in muuqaalada dhowr ah oo la xidhiidha Spotify iyo la music tayo sare leh , dadka isticmaala Spotify waxaa mar kasta damaanad iyadoo waxa ugu fiican. Waa madal kaas oo u ogolaanaya dagdag ah si ay malaayiin heeso iyo liiska songs jir ah in kuwa cusub ee ay helaan, ay helaan in malaayiinta songs joogo click kaliya.
1. adeegyada Spotify
2. Sidee si ay u dhagaystaan ​​Spotify u iPhone online
3. Sidee si ay u dhagaystaan ​​Spotify u offline iPhone
1 adeegyada Spotify
Waxaa jira saddex adeegyada Spotify, kuwaas oo loo qoran karaa sida Spotify lacag la'aan ah, maxkamad, premium Spotify u isticmaala iPhone.
Spotify free yahay kaliya hal nooc oo Spotify, kaas oo ka yimaadaa oo lacag la'aan ah oo bisha. Qiimo of 0.00 doolar bishiiba, 'play shaandheeyn' doorasho la codsiga Spotify yimaado xarunta isticmaala. Si kastaba ha ahaatee, codsiga uusan ciyaari doonin hiilaadkan. Qaababka sida Caad lacag la'aan ah, qashanka aan xad lahayn, offline Dhegayso, Play track kasta oo HQ audio 'ma la Spotify waxaa laga heli karaa lacag la'aan ah. Spotify lacag la'aan ah inaysan u ogolaan in aanu dadka isticmaala in ay helaan si ay u heeso marka in offline hab. Sidaas darteed, dhegaysi kasta oo ka mid ah heesaha oo markii isticmaala offline tahay suurtogal ma aha.
2) Trial Spotify
Trial Spotify waxay siisaa dadka isticmaala ku khiyaar ah inuu ka faa'ideysto muuqaalada premium ee Spotify ah iyadoo aan wax lacag waxba. Iyadoo fursadaha lacagta laga heli karaa lacag la'aan ah oo ah qiimaha muddo 30 maalmood inta badan dalalka, users la siiyo fursad ay music ka kala joogsi lahayn, iyada oo aan la xayeysiis iyo music qeexitaanka sare. Iyadoo fursadaha ku dhawaad ​​30 maalmood version maxkamad, dadka isticmaala ee ay heli karaan oo dhamaystiran adeega caymiska ee Spotify ah. Waxay ku xiran tahay dadka isticmaala ay kadib marka 30 maalmood in ay u xagliyaan adeegyada caymiska ama in ay sii wadaan version xorta ah ee Spotify.
3) premium Spotify
Spotify Premium waa muujinta ugu fiican ee Spotify ah kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala ku, doorasho kasta muusikada ciyaaro mar walba. Marka kaliya qiimaha 9.99 doolar bishiiba, isku shaandheyn ku play, Ad lacag la'aan ah, qashanka aan xad lahayn, Dhegayso offline, Play track kasta, HQ music maqal ah waxaa laga heli karaa isticmaalayaasha. Spotify Premium ku lifaaqan la mid feature aad u muhiim ah oo ah qaab offline Music dhagaysiga doorasho heli karaa in dadka isticmaala ee category joogtada ah ee caymiska. Waxay fursad u haystaan ​​dhegeysato muusikada daqiiqad kasta wakhti, meel kasta oo aduunka iyada oo aan la xiriira internet-ka.
2. Sidee inay dhegaystaan ​​Spotify u iPhone online
Dhageysiga Spotify u iPhone online la tarin karaa labada isticmaala lacag la'aan ah iyo caymiska ee Spotify. Labada category ee isticmaala in ay dhacdo online dhegaysan kartaa qaybta weyn ee music heli karaa database ee Spotify. Si kastaba ha ahaatee, tayada music ka duwan tahay labada kiiska. Iyadoo xisaabta lacag la'aan ah, dadka isticmaala ee ay heli karaan si ay u music la 192 kbps halka la koontada lacagta caymiska ee Spotify, dadka isticmaala waxay ka faa'iidaysan karaan music ee heerka ugu sareeya ee 320 kbps.
1 Sida loo soo bixi app for iPhone
Mid ka mid ah habka si aad u hesho caymiska karaa lacag la'aan ah waxay u soo maraan muddo hal mar maxkamadda ama xayaysiis iibsadaan.
Si ay u dhagaystaan ​​Spotify u Users online iPhone, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inay soo bixi app rasmiga ah ee la mid ah. Marka aad ka raadin ah oo ku saabsan dukaanka app la keyword 'Spotify' ah, natiijada hore, kaas oo ka yimaadaa aad screen, waa app rasmi ah Spotify. Just guji ku yaal iyo download it.
3 qaabka loo dhageysto online on iPhone app
Habka uu u ciyaaro music Spotify on iPhone online ku lug leedahay isticmaalka internet-ka oo kaliya si la mid ah sida Spotify ee desktop-ka. Sida adeega geeyo ah, Spotify isticmaalaa xiriir Internet firfircoon u ciyaaro music. Had iyo jeer xasuuso xaqiiqada ah in dadka isticmaala Premium ah doorasho hab offline leeyihiin, halka dadka isticmaala lacag la'aan ah oo kaliya ay heli karaan adeeg Spotify, halka xiran internetka.
3. Sidee inay dhegaystaan ​​Spotify u offline iPhone
Spotify Premium saamaxaya kuwa isticmaala inay ciyaari playlists offline. Dhismahani wuxuu u san yahay, waayo, gaadiid diyaarad, ama meel kasta oo aduunka ah halkaas oo ay helaan internet-ka aan la heli karin.
Tallaabooyinka lagu Play music Spotify on offline iPhone
Ujeedada dhagaysto music Spotify on offline iphone, tallaabooyinka waa sida soo socota:
Talaabada 1: Iyada oo xiriir Internet firfircoon, dooro playlist ah
Talaabada 2aad: By default waxaad u baahan doontaa in ay ku xidhmaan badan Wi-Fi. Haddii aad jeceshahay in aad u hagaagsan kuwan raadkaygay badan 3G / 4G, shid 'nidaameed badan gacanta ee Settings ka dibna Music Quality
Talaabada 3: Tubada Available offline in ON sare ee playlist ah
Talaabada 4: arrow A cagaaran muuqan doona si ay u playlist marka waa la heli karaa
Daar offline Mode in Settings ka dibna Radidiyaha oo laga faaiidaysanayo wareegto hogaanka
Download music Spotify free la TunesGo iyo maqli mar walba qalab kasta oo
> Resource > Spotify > Spotify u iPhone online ama Spotify offline u iPhone